သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): ကိုရင်တက်ပု
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 02:35
bell သံတစ်ညံညံ give ပါတဲ့..
ရွာ school ကို run မြင်မိရင်
remember နေတယ် my friend ရေ
i များ baby တုန်းက ရွာအ၀င် road ဆီကနေ
လက်ချင်းယှက်ကာ.. run ကာ run ကာ
school climb လာကြတာတွေ
you တို့ i တို့. baby တုန်းကလေး))
Wednesday, 30 November 2011 at 03:37:00 GMT
Wednesday, 30 November 2011 at 04:47:00 GMT
ဟဟဟ လို့အော်ရီလိုက်ပါတယ် အဆုံးမတော့ ..
သူက ကိုရီးယား K K M K ဖြစ်နေတာကိုး ဟိဟိဟိ
Wednesday, 30 November 2011 at 04:51:00 GMT
ဆက်လက် read ဖို့ လာမယ့် to be continue အခန်းလေးကို wait နေရင်း အားပေးသွားပါသည်။
Wednesday, 30 November 2011 at 05:43:00 GMT
Wednesday, 30 November 2011 at 05:44:00 GMT
မပြီးသေးဘူးနော် ဆိုတော့ ဆက်ဖတ်ဖို့ စောင့်နေပါတယ်။ ဒါနဲ့ ရန်ကုန်ဘူတာရုံကြီးကနေ ဘယ်ကိုများ ခရီးနှင်မှာပါလိမ့်။။။
(မရောက်တာကြာသွားလို့ ခုမှ ဖတ်နေရတယ်၊ နေကောင်းပါရဲ့လား သူကြီးမင်း)
Wednesday, 30 November 2011 at 06:33:00 GMT
Read ရင်း Laugh သွားပါတယ်.. သူကြီးမင်း..။
Wednesday, 30 November 2011 at 10:39:00 GMT
Wednesday, 30 November 2011 at 12:44:00 GMT
အလဲ့ ကိုရင်တက်ပုကျတော့ တယ်ဟုတ်ပါကလား...ခပ်ငယ်ငယ်တုန်းက တွေ့ဖူးတဲ့ အညာကျောင်းက ကိုယ်တော်လေးကျတော့ အဲဒီလောက်တောင်မစွမ်းရှာဘူး သူကြီးမင်းရဲ့...
အဲဒီကိုယ်တော်လေးက အင်္ဂလိပ်စာ အသံထွက်စာအုပ်ကို ဖတ်ပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းသားတွေကို အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးတာ ...
၀ှပ်-ထ အစ်-စ သစ်-စ...
သစ်-စ အစ်-စ အေ ဘွတ်-ခ...ဆိုပဲ...
ဘိလပ်သွားမယ့် သူကြီးမင်းလည်း ကိုရင်တက်ပုကို အားကျပြီး အင်တိုက်အားတိုက်ကြိုးစားခဲ့လို့ အခုလို ပေါက်မြောက်သွားတာဖြစ်မယ်ထင်ပါ့...ကိုရင်တက်ပုလိပ်စာလေးများလည်းရှိရင် မစပါလား...သင်တန်းမှာ အင်္ဂလိပ်စာပြခန့်ချင်လို့...ဒါပေမယ့် ကျောင်းသားတွေကို အဖြူရောင်မ၀တ်ဖို့ အရင်ကြိုပြောထားမှ...ဒီလောက်ဘိုလိုလွှတ်နေမှဖြင့် ကလေးတွေရဲ့ အ၀တ်တွေ ဖားဥစွဲကုန်မှာ သေချာလို့...းးး)))
Wednesday, 30 November 2011 at 13:59:00 GMT
ကိုရင်တက်ပုကိုအားကျပြီး TGM (LONDON) သင်တန်းဖွင့်ဖြစ်ရင် လှမ်းခေါ်လိုက်အုံးနော်း))
တူဒေးတော့ ပင်ပန်းလို့ အားလီး စလိတော့မယ် တဂျီးမင်းရေး)
Wednesday, 30 November 2011 at 15:09:00 GMT
I လဲ you တို့လို read ဖို့ လာတာပါ
အပေါ်မှာ jasmine တစ်ယောက်ပါလား
i don't know ဖြစ်သွားရတယ်
khin khin မင်မင် jasmine
Wednesday, 30 November 2011 at 15:52:00 GMT
ဆက်ပါဦး . . . မျှော်လျက်
Wednesday, 30 November 2011 at 16:35:00 GMT
ကိုရင် တက်ပုဆိုလို့ နည်းနည်းတော့ တက်ပုတွားသေးတယ်..။ တော်သေးတယ်..တုံးဖလားက တက်ပု ဖစ်နေလို့.. :D
ဆိုတော့ကာ မပီးသေးတော့လည်း ဆက်ပေါ့ဗျာ..
Wednesday, 30 November 2011 at 19:10:00 GMT
I လည်း တဂျင်းမီးပို့ စ်ကို လာ read ရင်း smile သွားပါတယ်
Thursday, 1 December 2011 at 00:28:00 GMT
သူဂျီးမင်းပိုစ့်ကိုဖတ်တော့မှ အင်္ဂလိပ်စာမှာ ကိုရင်တက်ပုလောက်တောင် မ know သေးပါလားဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်.. U M A သွားတက်ဦးမှပါ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် U M A မှာတက်တယ်ဆိုတော့ ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုနဲ့ လူအထင်ကြီးခံရ နည်းလားနော်.. ကိုရင်တက်ပုဆီ လိပ်စာတောင်းထားဦးမှပါ..
ဘာတွေများ ဆက်ဦးမလဲ သူဂျီး ရယ်မောဖို့ အဆင်သင့်ပါ :P
Thursday, 1 December 2011 at 03:14:00 GMT
ဟားဟားဟား... ကျွန်တော်ကတော့ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာတွေရဲ့ဖြစ်ရပ်ကို သရော်ထားတယ်လို့ပဲ မြင်မိတယ်... အင်္ဂလိပ်စာကို မြန်မာစာလုံးထဲ ညှပ်ညှပ်ပြောတာလောက် နားယားတာမရှိဘူး..... အဲဒါ ဟိုးနာမည်ကြီးဆိုတဲ့ဝတ္ထုရေးဆရာမတွေက အစ.... ဖျက်ဆီးနေတာ... မြန်မာစာကို..
Thursday, 1 December 2011 at 06:25:00 GMT
သူကြီးမင်း.. ခုမှ exam ပြီးလို့ free သွားတယ်လေ.. အဲ့ဒါကြောင့် လာ visit ရင်း read ဖို့ အကြွေးကျန်တာတွေ read သွားတယ်.. ဟိဟိ.. :P :P
Friday,2December 2011 at 14:37:00 GMT
U. M. A လား ဘုန်းဘုန်းကမ္ဘာအေးတက္ကသိုလ်မှာ တက်စဉ်တုန်းကပေါ့။ U. M. A အရှည်ကောက်ကို မသိတဲ့ ဦးပဇင်းလေးတစ်ပါးက ဆိုင်ထဲဝင်ပြီး ဦးမာစာအုပ်ရှိလား။ တစ်အုပ်ဘယ်လောက်လည်းတဲ့။
Friday,2December 2011 at 15:06:00 GMT
အမြဲတမ်းလာလာ read နေတဲ့
Wednesday, 14 December 2011 at 13:14:00 GMT
တမင်ရေးထားတာလားတော့မသိဘူး။ ဖိုသီဖတ်သီက ဘူတီဘတ်တီ ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။ ခေတ်ကို သရော်တတ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။ ရေးလက်ကောင်းသူတစ်ယောက်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။
Sunday, 18 December 2011 at 06:24:00 GMT
တမင်ရေးထားတာ မဟုတ်ဘူး။ သတ်ပုံမကျေတာလေ။ ဟာ ဟ။
ပြန်ပြင်လိုက်ပြီ။ ကျေးဇူးနော်။ အခုလို ထောက်ပြပေးလို့။
နောက်လဲ သတ်ပုံတွေ မှားနေတာတွေ့ရင် အားမနာတမ်း ထောက်ပြစေချင်ပါတယ်။
Sunday, 18 December 2011 at 10:01:00 GMT
writings services online said...
basic human rights and liberties and democracy is impossible without the participation of writings services online
Tuesday, 8 January 2013 at 15:24:00 GMT